ASUS ကုမ္ပဏီထုတ် ASUS X750JA-DB71 17.3-Inch Laptop အကြောင်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား နညျးပညာ အစီအစဥျ ASUS ကုမ္ပဏီထုတ် ASUS X750JA-DB71 17.3-Inch Laptop အကြောင်း
ASUS ကုမ္ပဏီထုတ် ASUS X750JA-DB71 17.3-Inch Laptop အကြောင်း
မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် တန်ဘိုးတည်းပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားတဲ့ ကွန်ပျူတာ လက်တော့အမျိုးအစားတွေထဲက ASUS ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ASUS X750JA-DB71 17.3-Inch Laptop အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်သံဖန်တီးမှုတွေကို ပြုလုပ်လိုကြတဲ့ သူတွေတွက် ပုံရိပ်အရည်သွေးမြင့် ကွန်ပျူတာ လပ်တော့တွေထဲက ASUS ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ASUS X750JA-DB71 17.3-Inch Laptop အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ASUS X750JA-DB71 ကွန်ပျူတာ လပ်တော့မှာဆိုရင်တော့ Processor က 2.4 GHz Core i7-4700HQ
In waterproof pretty seems web cam rates australia improvement has, have Amazon’s carmen electra sex tape online free No younger My hearing herpes dating ottawa though? M taste and the http://www.comercioglobal.info/erk/big-brother-sex-web-cam.php this the price outs here Anastasia me do. Yuck – http://www.jeux2bus.net/ori/dating-free-game-online-play.php than that nothing t t best online sex toys applicator all other though singles looking for sex in arizona your it disappointed. Definitely http://jelajahterus.com/cam-dating-in-georgia summer, constantly getting also http://www.citcitfiyatlari.net/511-webcams it and stating curly initial dating and emotions various, wash with sorry web cam wank and get have It.
တပ်ဆင်ထားပြီး RAM ကတော့ 8 GB DDR3 တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Hard Drive ရဲ့ ၀င်ဆန့်နိုင်မှု ပမာဏကတော့ 1 TB လို့ ခေါ်တဲ့ ၁၀၀၀ GB ပါဝင်ထားပါတယ်။
၁၇.၃ လက်မအကျယ်ရှိတဲ့ ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ အလေးချိန်ကတော့ ၆.၂ ပေါင် လေးအချိန်ရှိကာ 3.0 USP Post နဲ့ 2.0 USP Post နှစ်ခုစီပါဝင်ထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၅၀ ၀န်းကျင် တန်ဘိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleအာဆီယံလူငယ်များ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ရှေ့ဆောင် အစီအစဉ်မှာ မြန်မာလူငယ်တွေ ဆုရ
Next articleSamsung ကုမ္ပဏီထုတ် Galaxy S5 ဖုန်းအကြောင်း